ज्ञान–विज्ञानका महापण्डित शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको नेपाल भ्रमण (विशेष) | नेपाल आज
ज्ञान–विज्ञानका महापण्डित शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको नेपाल भ्रमण (विशेष)
बिहिबार, २७ बैशाख २०७५ गते मा प्रकाशित
काठमाडौं । गोवर्द्धन मठ–पुरीका पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य पुज्यपाद स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज नेपाल आउने भएपछि उहाँको स्वागत, अभिनन्दन समारोहकालागि आयोजक पक्षले तयारी तीव्र पारेको छ ।
शंकराचार्यको काठमाडौंको टुँडीखेलमा जेठ १ गते मंगलबार ११ः ३० बजे नागरिक अभिनन्द हुने भएको छ । अनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामीजीले काठमाडौंमा पहिलोपटक धर्म–जीवन–दर्शनबारे प्रवचन पनि दिनेहुनु भएको छ । शंकराचार्य स्वागतार्थ मूल समितिले उहाँको अभिनन्दनमा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
शंकराचार्यको जेठ १ मा काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन हुने भए पनि उहाँ दिल्लीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैशाख ३० गते दिउँसो २ः ३० बजे अवतरण गर्नुहुनेछ । वैशाख ३१ गते दिउँसो ११ बजे उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट हुने वनकाली हंसमण्डपमा अभिनन्दन समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ । जेठ १ गते दिउँसो ११ बजे टुँडिखेलमा नागरिक अभिनन्दन पछि सोही दिन साँझ ५ बजे अग्रवान भवनमा धार्मिक संगोष्ठीमा सहभागी हुनुहुनेछ ।
जेठ २ गते दिउँसो ११ः३० बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाकक्षमा धार्मिक संगोष्ठी प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि शंकराचार्य सहभागी हुनुहुनेछ । सोही दिन साँझ पाँच बजे अगैवान भवनमा अनुगमन गोष्ठी र समिक्षामा सहभागी हुनुहुनेछ ।
जेठ ३ गते दिउँसो ११ बजे हवाईमार्गबाट चितवन प्रस्थान गर्नु हुनेछ । उहाँको आवास मनोकामना टोलमा हुनेछ । त्यस्तै गरी जेठ ४ गते ११ः ३० बजे उहाँको चितवनमा पनि नागरिक अभिनन्द हुनेछ । स्वामी शंकराचार्यले सोही दिन ४ बजे आध्यात्मिक संगोष्ठीमा प्रवचन दिनुहुनेछ । जेठ ६ गते वीरगञ्ज प्रस्थान गर्नु हुनेछ । जेठ ७ गते पनि उहाँको वीरगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन हुनेछ । जेठ ८ गते रक्सौल हुँदो भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
शंकराचार्यको नेपाल भ्रमणबारे मूल समितिको पत्रकार सम्मेलन
को हुन् निश्चलानन्द सरस्वती ?
– गोवद्र्धन मठ–पुरी पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु पुज्यपाद शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द ‘शंकराचार्य गुरु परम्परा’का १४५ औं शंकराचार्य हुनुहुन्छ ।
– उहाँ सन् १९९२ देखि जगद्गुरु शंकराचार्य भएका हुनुहुन्छ ।
– उहाँ ज्ञान र विज्ञान दुवै विषयका ज्ञाता हुनुहुन्छ ।
–उहाँका १६१ विख्यात कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
– अक्सफोर्ड र हावर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले उनीसँग पुरी–उडिसामा पुगेर वैदिक गणित विषयमा ज्ञान हासिल गर्ने गरेका छन् ।
–उहाँ सनातन सिद्धान्तका बारेमा सम्पूर्ण शुद्धतापूर्वक उद्भासित हुनुहुन्छ ।
– नेपाल स्वतन्त्र रहे मात्र भारत स्वतन्त्र रहने हो, नेपालको सनातन मूल्य परम्परा जीवन्त रहे मात्रै भारतको सनातन मूल्य परम्परा जीवन्त रहन सक्ने हो भन्ने उनको महान विचार छ ।
– उहाँका ग्रन्थहरुमध्ये शिवावतार, सार्वभौमिक सनातन सिद्धान्त, विश्वशान्तिका सनातन शिद्धान्त, बौद्ध सिद्धान्त र वेतान्त, गणित दर्शन, स्वस्तिक गणित, श्री गीतासुधा, श्री राधासुधा, गर्व से कहें हम हिन्दू हैं जस्ता विख्यात छन् ।
शंकराचार्यको स्वागतका लागि स्वागतार्थ मूल समारोह समिति गठन भएको छ । समितिको संयोजकमा काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित बैंकटेश्वर मन्दिर देवस्थानका पीठाधीश्वर स्वामी पद्मधराचार्य तोकिनु भएको छ । मूल समारोह समितिले प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापन, शंकाराचार्यको सवारी, आवास आदिको प्रबन्ध गरिरहेको छ । समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि तयारीबारे औपचारिक जानकारी दिएको थियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अभिनन्दन गर्ने क्रममा शाहको सम्मान ग्रहण गर्दैै शंकराचार्य ।
शंकराचार्य स्वागतार्थ मूल समारोह समिति
स्वामी पद्मधराचार्यः संयोजक
हरिबोल भट्टराई ः सहसंयोजक
अस्मिता भण्डारी ः सहसंयोजक
नीलप्रसाद भण्डारी ः सहसंयोजक
डा. रामचन्द्र अधिकारी ः सहसंयोजक
किशोरी महतो ः सहसंयोजक
अर्जुनप्रसाद बास्तोला ः सहसंयोजक
श‌कराचार्य भ्रमणबारे पदाधिकारीहरुकाे विचार
भरतकेशर सिंह, अध्यक्ष विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय
गोवर्द्धन मठ–पुरी पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु पुज्यपाद शंकराचार्यको नेपाल आगमन धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । उहाँले नेपाल आउनुमा आफै पनि सबै हिन्दुहरुका लागि खुसीको कुरा हो । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियसँगै अन्य २४–२५ वटा संस्थाहरु मिलेर उहाँको स्वागतका लागि काम गरिरहेको छ ।
शंकराचार्यज्यूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषले पनि निमन्त्रणा पठाएका हुन् । यसअर्थमा उहाँ राष्ट्रकै अतिथी भएर आउन लाग्नु भएको हो । उहाँको भ्रमण सफल पार्न विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व र कर्तव्य पूरा गरिरहेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य अन्य संघ संस्था अनि सरकारले पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
स्वामी पद्मधराचार्य, पीठाधीश्वर, बैंकटेश्वर मन्दिर देवस्थान, काठमाडौं ।
नेपाल आउन लाग्नु भएका शंकराचार्य गुरु परम्पराका अविच्छिन्न शंकराचार्यहरुको १४५ औं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँको स्वागतका लागि धेरै संघसंस्था, सरकारी निकायले पनि काम गरिरहेको छ । म शंकराचार्य स्वागतार्थ मूल समारोह समितिको संयोजक पनि हुँ । यो समितिले उहाँको स्वागतका लागि विभिन्न तयारीहरु गरिरहेको छ । तयारी तीव्र छ । उहाँको नेपाल भ्रमण सुखद र सफल हुने विश्वास गरेको छु ।
किशोरी महतोः संयोजक, मञ्च व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति
२४ सय स्क्वाएर फिटको मञ्च टुँडीखेलमा बनाउँदैछौं । बनाउन थालेको चार दिनमा पूरा हुन्छ । त्यहाँ सात हजार स्क्वायएर फिटको वाटरप्रुफ पण्डाल पनि हुनेछ । टुँडीखेलमा ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यक्रम हुन्छ । त्यसमा शंकराचार्यले डेढ घन्टा जति प्रवचन दिनुहुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौं ।
बुद्धिमान तामाङ , उपाध्यक्ष, राप्रपा ।
शंकराचार्य भनेको को हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । आदि शंकराचार्य भनेको महाभारतको समयमा उहाँले जन्म लिनु भएको थियो । भगवान शंकरकै अवतारको रुपमा शंकराचार्यलाई बुझ्ने गरिन्छ । उहाँले चार स्थानमा पुजा गर्नुभएको थियो । त्यही भएर चार पीठका चार शंकराचार्य रहेका छन् ।
संसारमा धर्म नष्ट हुन थालेपछि, पापीहरु बढ्न थालेपछि धर्मले बाँध्नका लागि शंकराचार्यले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । अरुको अहित गर्नेहरुलाई धर्मको नियमले बाँधेर रोक्नका लागि भगवान शंकरले शंकराचार्य पठाउनु भएको हो । त्यो गुरु परम्पराको निरन्तरता नै अहिलेका शंकराचार्य हुनुहुन्छ । उहाँजस्तो मान्छे नेपाल आउनु भनेको हामी सबै नेपालीहरुका लागि ठूलो उत्सवको कुरा हो ।
९४ प्रतिशत ओमकार परिवारका मानिसहरु बस्ने देश हो नेपाल । यस्तो देशमा शंकराचार्य आउनु भनेको धेरै महत्वको कुरा हो । पश्चिमाहरुले हाम्रो देशको धर्म संस्कृति नष्ट गरिरहेको बेला धर्म गुरु आउनु र हिन्दु धर्मको संरक्षणका लागि योगदान दिनु धेरै नै ठूलो कुरा हो ।
अस्मिता भण्डारी, सहसंयोजक, शंकराचार्य स्वागतार्थ मूल समिति
हालको सरकार हिन्दुहरुको भोटले बनेको हो । वामपन्थी सरकार भए पनि, कम्युनिष्टहरुको सरकार भए पनि हिन्दु धर्म मान्नेहरुले दिएको भोटबाट नै सरकार गठन भएको हो । यति भएर पनि वर्तमान सरकारले हिन्दु धर्मलाई उपेक्षा गरेको छ भन्न सक्दिनँ । किनभने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत शंकराचार्यलाई निम्तोपत्र गएको छ ।
सरकारले समेत शंकराचार्यको मान गरेकै देखिन्छ । तर हेर्दा त्यस्तै देखिनु र वास्तवमै मान गर्नु फरक कुरा हो । शंकराचार्य आउन लाग्नु भएको विषयमा सरकारको ध्यान गएको देखेको छैन । हुन त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको नेपाल भ्रमणका कारण पनि सरकारको ध्यान त्यता गएको होला । तर सरकारले एकजना मन्त्री वा सचिव तोकेर स्वामी शंकराचार्यको स्वागतका लागि, व्यवस्थापनका लागि काम दिन सक्थ्यो । त्यस्तो अनुभूति भइरहेको छैन । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएकी छु ।